PDF ကစဖွင့်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်-ဆောင်းပါး… – PVTV Myanmar
PDF ကစဖွင့်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်-ဆောင်းပါး…
PDF ကစဖွင့်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်-ဆောင်းပါး
Like – 16K Share – 3399
မင်းတပ်ပြသာနာကိုပြန်အဖြေရှာရင် ဒါဟာ NUG ရဲ့ပေါ့ဆမှုပါပဲ
NUG ကဖွဲ့စည်းတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဟာ ချက်ချင်းကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာမျိုး တိုက်ခိုက်တာမျိုးစိုရင်စစ်ကောင်စီဖက်က နယ်မြေအတိကျသိပီးရသမျှ အင်အားသုံးပြီး ဆော်မှာသိတဲ့အတွက် PDF ကိုတော့အပြစ်မပြောလိုပါဘူး
ဒါပေမယ့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF/A)နဲ့သာချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးထားရင် ချင်းပြည်နယ်တခုလူံးဟာ တော်လှန်ရေးနယ်မြေဖြစ်လာမှာပဲ မင်းတပ်ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့အဆက်သွယ်ရရက်နဲ့ ထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်တာဟာ NUG အပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့သွားတယ်စိုတာ သိစေချင်တယ်
မင်းတပ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ CNF/A နဲ့ပူးပေါင်းစေချင်ပါတယ် ဒါမှသာ စစ်ရေးနဲ့ခေတ်မီလက်နက်တပ်ဆင်နိုင်မှာပါ NUG ရဲ့အခြေနေကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ CNF နဲ့သာအမြန်ပူးပေါင်းပေးပါ
NUG အနေနဲ့လဲ CNF နဲ့ညှိနှိုင်းရေးကို ပိုဂရုစိုက်ဦးတည်စေချင်တယ်
မြို့နယ်အလိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလဲ လူအင်အားနဲ့လက်နက်အင်အားပြည့်မီတဲ့အခါ PDF တပ်တွေညှိပီး တိုက်ခိုက်စေချင်တယ်
မင်းတပ်တွက် NUG ရဲ့ပေါ့ဆမှုကို ဘယ်ဝန်ကြီး တာဝန်ခံမလဲ?
Lin Tayza says:
Chit Myo Ko says:
2021-05-15 at 5:23 PM
မင်းတပ်ကို ဘာမှ လုပ်မပေးတော့ဘူးလား
2021-05-15 at 5:24 PM
စစ်သေနာပတိချုပ် ဖြစ်ရပါမယ်။ စစ်သေနာပတိချုပ်က အရပ်သားပါ။ စစ်သေနာပတိက စစ်သားပါ
စိတ်ကျန်းမာရေးတွေတော်လောက်ပြီ။ နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့ပက်သတ်ပြီးလုပ်ကိုင်နေရတာ မလွယ်ကူဖူးဆိုတာ ကိုသိတယ်။ အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတာ အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါရှိတယ်။မင်းတပ်မှာ ပြည်သူတွေတော်တော်များများသေနေပြီ။ pdfလည်းဖွဲ့ppမလား တိုက်သင့်နေပြီတနိုင်ငံလုံးအနှံ့။ ကျူးဘားအရေးမှာတောင် လေ့ကျင့်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တာမဟုဖူး။ ဘာမှမtrainထားတဲ့လူအတော်များများနဲ့တိုက်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာ။ ငါတို့ယုံကြည်တဲ့အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူလိုအပ်နေတာကိုပေးနိုင်တဲ့လူ ပြည်သူဆန္ဒကို ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့လူ စကားကိုလက်တွေ့အကောက်အထည်နဲ့ သက်သေ ပြတဲ့လူမျိုးကို အစိုးရ လို့ခေါ်တာ။ လေ လှိုင်းထဲ ကြေ ငြာချက်တွေရပ်သင့်နေပြီနော်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တော့။ လက်နက်မရှိတာ ဝယ်လို့ရတယ်။ တိုက်မဲ့လူမရှိရင်တော့ဝယ်လို့မရဖူး။ ကိုလုပ်စရာရှိတာသာ လုပ်သွား un us တွေလေ ထဲက ကောင်တွေ နောက်ကလိုက်ထောက်ခံလာလိမ့်မယ်။ သူတို့အကောင်အထည်ဖော်တာစောင့်နေသ၍ ငါတို့သားသမီးတွေ သေသွားတာမျိုးထပ်အဖြစ်မခံနိုင်တော့ဖူး
2021-05-15 at 5:28 PM
🙏🙏🙏 ကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ခုခုကူညီပေးကြပါ
ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ရေ စစ်ဘီလူး တွေရဲ့ မတရား အကြမ်းဖက် ခံနေရတဲ့ ဒီမြို့လေးတွေကို ကာကွယ်ပေးကြပါ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီအတိုင်း မထားကြပါနဲ့
2021-05-15 at 5:29 PM
ဘာမှ မသိချင်ဘူး မင်းတပ်မြို့ လူမျိုး တုန်းတော့မယ် ခုချိန် မှ မတိုက် ဘယ်အချိန် တိုက် ပြီး ပြည်သူတွေ ဘက်က ရပ်တည်မှာလဲ
2021-05-15 at 5:32 PM
မင်းတပ်မြို့ အတွက် အချိန် ၃ရက် စောင့်ကြည့်မယ် ဘာမှ မဝန်းရံရင် ဘာမှ အကူအညီ မပေးရင် တော် ပါပြီ NUG
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပီး ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကို မကူညီနိုင်ဖူးလို့မပြောယုံတမယ် UN အကွက်လိုစာလာထုတ်ပြတယ် မမစပ ငါတို့ပြည်သူတွေပဲ အမြဲခံရတယ် လီးပဲ
2021-05-15 at 5:41 PM
မင်းတပ်က ဆီဆွတ် ခံနေရပြီ လီးဘဲ
2021-05-15 at 5:52 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် background music ကနည်းနည်းဆူညံနေတယ်လို့ထင်ကြောင်းအပြုသဘောအသိပေးလိုပါတယ်။
စာတွေထုတ်နေတဲ့ budget ရော ၊ အင်အားတွေရော အားလုံးကို မအလ တပ်ကို ဖြုတ်ချတဲ့နေရာမှာသာ 🏹🤺🔫💣🗡 အစွမ်းကုန် သုံးပါတော့လို့ အပြုသဘောဖြင့် မိမိသဘောကို တင်ပြချင်ပါတယ်
2021-05-15 at 6:31 PM
2021-05-15 at 6:46 PM
နာညီးတယ္ ဒါေတြနားမေထာင္ခ်င္ေတာ့ဘူး Ground Action ကိုပဲ လိုလာတယ္ ပါဝင္မယ္ အခုက ေဝေလေလ ျဖစ္ေနတယ္ NUGက
Nay Zin Maung says:
2021-05-15 at 7:07 PM
2021-05-15 at 7:27 PM
Min Hein Khant says:
2021-05-15 at 8:37 PM
public voice ဆို nug ဘာ action မှ မဝင်သဖြင့် ပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်း ဆဲဆိုနေကြသည်ဆိုတာလေး တင်ပါလား
2021-05-15 at 8:39 PM
The main PDF has yet to fireasingle shot while the mushrooming local PDFs up and down the land now in open revolt are trying to hook upalifeline for arms and ammo. It’s the least the CRPH/NUG can do right now to bring those brave resistance fighters from the 19thC into the 21st in weaponry. Budget allocation and logistics right now for Mindat please.
2021-05-15 at 9:30 PM
တခုပြောဦးမလို့ တပ်မတော်လို့ သုံးနှုန်းတာမကြိုက်ဘူး ရှင်းရှင်းပဲ AA သုံးတဲ့ တပ်တော် လို့ဆိုတာလေးမဆိုးဘူး တခြားနာမ တစ်ခုသုံးပါဗျာ တပ်မတော်ဆိုတာနဲ မုန်းလွန်းလို့ပါ
Helen Htun says:
2021-05-15 at 9:52 PM
We support CRPH, NUG, PDF.
ဘယ်သူခွဲခွဲ ဒို့မကွဲ အမြဲစည်းလုံးမည်… အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်
Shwe Mintha says:
ဘေးထိုင်ပြီး FaceBook ပေါ်မှာ ဘု ပြော နေသူတွေ အများသား
Sri Yar Gyi says:
2021-05-16 at 12:42 AM
PDF သည်သာ ပြည်သူ့ တပ်မ​တော်ဖြစ်သည်။
Pyae Phyo Htike says:
2021-05-16 at 1:22 AM
မင်းတို့က စာထုတ်အစိုးရလား အားနေစာတွေပဲထုတ်နေလိုက် လက်တွေ့ခံနေရတော့ ပြည်သူတွေ
2021-05-16 at 7:16 PM
2021-05-17 at 11:04 PM
Cho Win Aung Aung says:
2021-05-18 at 12:30 AM
နောက်ခံစကားပြောက မြန်မာ့အသံက CDM ဉီးကျော်စိုးလင်း လား။
သဲေပါက္ရဲ့ ကိုကို says:
2021-05-19 at 10:33 AM
PDF တပ်မ​တော်မှာတာဝန်ထန်း​ဆောင်ကျင်ပါတယ် ဘယ်လိုဆက်သယ်ရမလဲ အသက်၃၉နှစ်ပါကြမ်မာ​ရေ​ကောင်းမွန်ပါတယ်
Gwar Gue says:
2021-05-20 at 8:39 AM
တတ်တော့တတ်တယ် မတော် = တတ်မတော်။
တပ်တော် Is better. Not တတ်မတော်။
2021-05-28 at 11:44 AM
အောက်ခြေတပ်သားတွေကို အထက်အရာရှိက တပ်စည်းကမ်းနဲ့ မဆိုင်ပဲကျော်လွန်ပြီးနိုင်ထက်စီးနှင်းပြုလုပ်ခိုင်စေလျှင် ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေကလဲ လိုအပ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်
ဒိုမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ အောက်ခြေတပ်သားတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပညာသင့်ခွင့်တွေကလဲ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ် ကြီးနိုင်ငယ်ငြင်ပုံစံမဖြစ်အောင် အပေါ်အောက်လိုက်ဖက်ညီ ဟန်ချက်ညီတဲ့ တရားမျှတမှန်ကန်တဲ့အမိန်အာနာ ဖြစ်ဖိုတော့လို့မယ်ထင်တယ် အောက်ခြေတပ်သားတွေ အရာရှိအရာငယ်တွေ ကိုယ့်အထက်က အနိုင်ခံရလျှင် မည်သူကို တိုင်ကြားရမယ် အဲအဖွဲ့အစီးက ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကလဲ လိုအပ်မယ်ထင်တယ်
2021-06-06 at 7:25 PM
2021-06-09 at 8:46 PM
“ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း အမေရိကန်အစိုးရက သိမ်းထာ…